मुसहरको पीडा : पति खान नपाएरै बित्नु भो, किरिया कसरी गर्ने ? |मुसहरको पीडा : पति खान नपाएरै बित्नु भो, किरिया कसरी गर्ने ? – हिपमत
‘१५ किलो चामल र १ सय २० रुपैयाँको सहारामा कति दिन बाँच्न सकिन्छ र? पछिल्लो ५, ७ दिनदेखि चुल्हो बलेकै छैन, चिउरा भुजा खाएर छाक टार्दै थियो । चिउराभुजा पनि सकिएपछि कोदालो खनेर केही पैसा आउँछ भनेर सोमवार जिद्दी गरेरै पठाएको थिएँ’ कञ्चनरुप नगरपालिका–५ पथरी रामपुरकी जलेश्वरी सदाले यसो भनिरहँदा आँखा रसाए ।